इन्द्र कार्की , महेन्द्रनगर, असोज,२१ जीवन सधै एकनासले अगाडी बढदैन । जीवनमा उतारचढाव आइरहन्छ । जसको दिमाग स्वस्थ हुन्छ, उसले यस्ता उतारचढावलाई सहजै स्वीकार्छ । दिमागलाई स्वस्थ राख्नका लागि आफूसँग रहेका सामान्य अस्वस्थ व्यवहार पन्छाउनुपर्छ । आफ्नो व्यवहार, भावना र विचार नियन्त्रण गर्न सकियो भने सफलता नजिकिँदै जान्छ । जीवनमा सफल बन्नका लागि केहि तथ्यहरुलाई […]
६ श्रावण २०७४ ०३:०५ July 21, 2017 bihani
एजेन्सी,साउन,६- यदि अधिकांश समय धनको संकट तपाईको जीवनमा आयो भने सम्भव छ की तपाई पनि यहाँ प्रस्तुत गरिएका मध्ये कुनै गल्ती अनिवार्य गरिरहनुभएको छ जसले देवी लक्ष्मी तपाईसँग असन्तुष्ट हुनुहुन्छ । तपाइलाई सधैं पैसाको अभाव भइरहेको छ ? यदि छ भने यी ९ वटा गल्तीहरु गरियो होला ! १) जून घरमा पूजाको दिप फुकेर जलाइन्छ […]
बाँके,असार,९- स्थानिय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचनमा बाँकेका युवा नेतृहरुको आकर्षण बढ्दो छ । नगर प्रमुख, उपप्रमुख,गाउँपालिका प्रमुख उप प्रमुख देखी लिएर खुला सदस्यका पदमा युवा महिला नेतृहरु खुला प्रतिसपर्धामा रहेका छन् । विभीन्न पेशा ब्यवसायमा आबद्ध युवा महिलाहरु समाजसेवकै लागि राजनितिमा आएको बताउँछन् । राजनितिमा महिलाहरु आकर्षण बढे संगै निर्णायक पदमा समेत उनिहरुको पहुच वृद्धि […]